ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု Lim Huat Chye - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လူငယ်များအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
ဆီးရောဂါပါရဂူ Lim က Huat Chye: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလုလင်တို့သည် (2012) အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
Gleneagles ဆေးရုံကြီးဆီးရောဂါပါရဂူဆရာဝန် Lim က Huat Chye သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျားလိင်ဆက်ဆံသည့်အခါက ပို. ပို. ခက်ခဲကျေနပ်မှုဖြစ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှင်အောင်မင်း Daily သတင်းစာ News သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ အချိန်မှာတော့ဒီလူလိင်အဘို့မိမိတို့အစာစားချင်စိတ်ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ, နှင့်ရလဒ်အဖြစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားနေကြရသည်။
ဒေါက်တာ Lim သူနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသည်သူ၏ဆေးခန်း၌ရှိသကဲ့သို့အများအပြားလေးအဖြစ်သို့မဟုတ်ငါးထိုကဲ့သို့သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမြင်ကပြောပါတယ်။
တူညီသောခေါင်းစဉ်လည်းအများအပြားအင်တာနက်သုံးသူတွေရဲ့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူ access ကိုပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်နည်းလမ်းများတစ်ခုတိုးပွားလာလိုအပ်ချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလားမေးခွန်းထုတ်အတူအင်တာနက်ကိုကျော်အားလုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်ကိုတွင်ကျယ်စွာအတွက်ကိုးကားကျွမ်းကျင်သူများက porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေဆငျးရဲခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ရက်သတ္တပတ် 12 အထိလိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးက start များအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းကိုကြည့်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
LINK - YourHealth ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂